Dhibanayaal Farmaajo - Dr. Maryan iyo Xil. Aamina | KEYDMEDIA ENGLISH
Dhibanayaal Farmaajo - Dr. Maryan iyo Xil. Aamina
Farmaajo, wuxuu beegsaday labadii qof, [Haween], ee wixii ugu fiicnaa sameeyay shanti sano ee uu xafiiska joogay, kuwaas oo sumad muuqata u noqday, wadaniuaddadda, [Kiiskii Qalbi-dhagax] iyo Cadaaladda, [Kiiskii, Ikraan].
MUQDISHO, Soomaaliya –Farmaajo, ayaa February 8, 2017, xilka Madaxweynaha Soomaaliya, ku helay, sheegashada wadaniyad aan waxba ka jirin, iyo dhaqan galinta cadaalad aan afka baarkiisa dhaafsaneyn, taas oo shan sano kadib ku soo biyo shubatay inuu beegsado shaqsiyaadka wadaniyadda iyo cadaaladda ehelka u ah.
Inkasta oo lagu wada baraarugay beenta uu xilka ku helay, isla-markaana uu dhamaan balan-qaadyadiisii garab maray, haddana, wuxuu iminka si gaar ah u bartilmaameed-sanayaa, haween ka hor istaagay ku tumashada sharciga dalka u yaal iyo xuquuqda muwaadiniinta.
Tusaale; Wasiirkii hore gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Dr. Maryan Qaasim Axmed, oo ahayd shaqsiga kaliya ee diiday, in Cabdikariin Qalbi-dhagax, loo dhiibo Itoobiya, ayuu Farmaajo, sabab arrinkaas la xariirta, uga hor istaagay, in ay u tartanto kursi Baarlamaan.
Maamo Maryan Qaasim, waxa ay magaalada Baeraawe ee gobolka Shabeellaha hoose, u tagtay, in ay u baratanto kursiga HOP#194, hayeeshee, Farmaajo iyo Laftagareen, ayaa isku hor-gudbay, waxaana kursigaas loo xiray, Wasiirka Dhallinyarada iyo Cayaaraha ee Xamsa Siciid Xamsa.
Markii la ii diiday ka qay-bgalka doorashada ayaan ogaaday, dembiyada la igu haystay inay ugu waynaayeen Qalbi dhagax iyo ONLF, iyo inaan wax la ii yeerin Karin. Ayay tiri, Dr. Maryan Qaasim.
Sidaas oo kale, Farmaajo, wuxuu hadda beegsanayaa, oo dadaalkii ugu badnaa ku bixinayaa inuu meesha ka saaro, tartankana ka hor istaago, Xildhibaan, Aamina Maxamed Cabdi, oo geed dheer iyo gaaban u kortay, sidii ay caddaalad ku heli lahaayeen qoyska Ikraan Tahliil, oo gacantiisa ku maqan.
Xildhibaan Aamina, ayaa u tartameysa, kursiga ay baarlamaankii 10-aad, ku fadisay ee HOP#135, hayeeshee, Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, oo ka cad goosanaya, maadaama ay meel sare gaarsiisay kiiska Ikraan, ayaa dadaal ku bixinaya in krsiga loo xiro Cumar Faaruuq, oo iyaga ku daaban.
DFS waxay isku dayaysaa inay iga hor istaagto inaan u tartamo HOP#135, sababtoo ah, waxaan ka soo horjeestay markii aan ahaa xubin katirsan Baarlamaankii 10aad, tani waxay ka hor imanaysaa habraacyada doorashada ee Golaha Wadatshiga Qaranka. Ayay tiri Xildhibaan Aamina.
Sidoo kale, Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi, waxa ay door muuqda ku lahayd Xildhibaano ka tirsanaa Labada Aqal ee Baarlamaankii 10-aad, kuwaas oo dadaal xooggan ku bixiyay in DF, xog cad ka bixiso dhalinyarada aan ilaa hadda la-hayn ee loo qaaday dagaalka Itoobiya.
Ruux kasta oo u dhuun-duleela siyaasadda, waxaa halkaas, uga cad in Farmaajo, uu beegsaday labadii qof, [Haween], ee wixii ugu fiicnaa sameeyay shanti sano ee uu xafiiska joogay, kuwaas oo sumad muuqata u noqday, wadaniyadda, [Kiiskii Qalbi-dhagax] iyo Cadaaladda, [Kiiskii, Ikraan].